सामाजिक सञ्जालमा श्रीपेजसहितको घर्तीको तस्बिर र मिम भाइरल बन्दै , को हुन् ‘भाइरल राजा’ ? हेर्नुहोस – Sandesh Press
September 25, 2021 255
काठमाडौं : रुकुम पश्चिम घर भएका २५ वर्षीय खेमबहादुर घर्ती शुक्रबार रातारात चर्चामा आए । नारायणहिटी दरबार संग्रहालयमा रहेको श्रीपेच कक्षमा तोडफोड गरेपछि पक्राउ परेका उनले प्रहरीलाई दिएको बयानले थप चर्चा पायो ।
घर्तीले श्रीपेच लगाएपछि राजा बनिन्छ भन्ने लागेर आफूले राजा बन्नकै लागि श्रीपेच लगाउन खोजेको प्रहरीलाई बयान दिएका छन् । उनले राजा बनेर शासन चलाउन श्रीपेच निकाल्न खोजेको बताएका छन् ।
महानगरीय प्रहरी वृत्त दरबारमार्गका प्रहरी प्रमुख डीएसपी रामेश्वर पौडेलका अनुसार हाल हिरासतमा रहेका घर्तीमा कुनै डरको छनकसम्म देखिदैन । उनले श्रीपेच लगाए राजा बनिन्छ भन्ने सोचका कारण कसैको पर्वाह नगरी सोकेसको सिसा फोड्दै अगाडि बढेको देखिएको डीएसपी पौडेले बताउनुभयो ।
यद्यपि प्रहरीको सम्पर्कमा आएकी उनकी दिदीले भने उनको मानसिक स्वास्थ्यमा समस्या रहेको बताएकी छन् । यो खबर बाहिरिएपछि सामाजिक सञ्जालमा घर्तीको चर्चा चुलीमा पुगेको छ । सामाजिक सञ्जालमा श्रीपेजसहितको घर्तीको तस्बिर र मिम भाइरल बन्दै गएको छ ।
केहीले घर्तीको साहासलाई देशमा राजाको शासन खड्किनुको परिणामका रुपमा लिएका छन्, केहीले राजनीतिक दलहरुको आपसी वैमनस्यताले जनतामा बढेको प्रस्टेशनलाई यो घटनाले उजागार गरेको बताएका छन् । प्रहरीले यस घटनामा थप अनुसन्धान गरिरहेको जनाएको छ ।
Prevजनगणना गर्न गएकालाई उल्टै प्रश्न- तपाईंलाई भनेर के पाइन्छ र?
Nextफेसबुकमा माया बसेर विवाह गरेकी मेरी छोरीलाई परिवार मि’लेर त’डपाएर मा’रे’
एक्कासी भाइरल कमला घिमिरेलाई के भयो ? किन रो’इन यति धेरै (भिडियो)
राजनीतिमा लागे ज्ञानेन्द्र शाही, ‘हाम्रो नेपाल हाम्रो नेपाली अभियान’ लाई नै अर्को पार्टीमा मिलाए